Lab fiarovana elektrika
Anbotek Electrical Safety Laboratory dia iray amin'ireo laboratoara voalohany indrindra an'ny orinasa manome fitsapana fiarovana sy fanamarinana ho an'ny tetikasa isan-karazany amin'ny vokatra elektrika sy elektronika ara-barotra sy trano fonenana.Ny fikambanana fitiliana Anbotek dia manana fitaovana sy fitaovana fitiliana mandroso.Manana traikefa manan-karena amin'ny injeniera fiarovana ary injeniera ara-teknika matihanina mihoatra ny 20, izay afaka mahafeno tanteraka ny filan'ny mpanjifa fitiliana sy fanamarinana.
• Ampio ny mpanjifa amin'ny fanafoanana ny loza mety hitranga mandritra ny famolavolana ny vokatra, toy ny fivoahana, ny halaviran'ny creepage, ary ny fanombanana ny famolavolana rafitra mba hisorohana ny fahaverezan'ny fanovana lasitra.
• Manaova fitiliana elektrika, fanombanana ara-drafitra, ary manolotra tatitra momba ny fanamarinana ho an'ny dingana fanamarinana mialoha ny vokatra.
• Mifandraisa amin'ny fikambanana fanamarinana ary miasa amin'ny anaran'ny mpanjifa mba hanatanteraka ny antontan-taratasy fangatahana, izay afaka mamonjy fotoana fampiharana ary mampihena ny fahasahiranana ho an'ny mpanjifa amin'ny fizotran'ny fangatahana.
• Ampio ny mpanjifa amin'ny fikarakarana ny fanaraha-maso ny orinasa ary manampy amin'ny famahana ny fanontaniana hita ao amin'ny fanamarinana ny orinasa.Ampio ny mpanamboatra hanao fifampidinihana fenitra fanofanana mpiasa SAFETY, fanofana trano laboratoara.
Intelligent PD fast charge, intelligent inverter complex, smart home, smart tokantrano fitaovana, intelligent light products, new generation information technology product, intelligent audio and video products, high-end manufacturing equipment, smart sockets, fitaovana fitsaboana, fiarovana sy fanaraha-maso fitaovana fandrefesana ary fitaovana fanaraha-maso Andraso.